हार्दिक आभार न्यूजिलेण्ड
जब हलमा पररर ताली बज्यो मेरा आँखा शायद खुशीले होला आँसुले टिलपिल टिलपिल थियो ।मैले मेरी छोरीले नदेख्ने गरि आँसु पुछें । एनको आँखा छल्न सकिन अनि उनले मलाई अंगालो मारिन् । डेभले सँगै फोटो खिचेपछि भने यु लुकिङ्ग लब्ली भनिन् । एन, म र मेरी छोरी मक्ख परेउँ ।
बर्ष २०२०–२१ को लागि पद हस्तान्तरण कार्यक्रम थियो वानाकाको एज वाटर रिसोर्टमा अपर क्लुथा लायन्स क्लब अफ वानाकाको । जहाँ मेरो छोरी सहित मलाई पनि पास्ट प्रेसिडेन्ट एनको निमन्त्रणा थियो । जुलाई ८ तारिकको सांझ ६ बजे कार्यक्रम हुने भनिएको थियो । साँढे पाँच बजे नै डेभ र एन हामीलाई लिन आईपुगे । नेपालबाट न्युजिल्यान्ड आएपछि बाहिर कुनै कार्यक्रममा जाने अवसर मिलेको थिएन । फेरि लायन्स क्लबको कार्यक्रम भनेपछि मलाई यहाँ कस्तो कार्यक्रम हुन्छ जान्ने उत्सुकता बढिरहेको थियो । एनले हामीलाई देख्ने बितिकै वाह भेरी नाईस लुकिङ लब्ली भनेर खुब फुर्क्याईन् । मैले नीलो सिल्क साडि, पिंक ब्लाउज, हल्का बैजनी स्वेटर, रातो पोतेमा तिलहरी, सिन्दुर, टीका, कानमा झुम्का लगाएकी थिएँ ।
हामी १५ मिनट अगाडि नै पुग्यौं । त्यहाँ समय खेर फाल्ने भन्ने त चान्सै थिएन । ठिक टाइममा पूरा उपस्थिति र तोकिएको समयमा कार्यक्रम सुरु भैहाल्यो । कार्यक्रममा सहभागी सबै आआफ्नो सिटमा आसिन हुनुहुन्थ्यो । जताततै नजर डुलाएँ मैले । मलाई एउटा कुरा अचम्म लागिरहेको थियो त्यो के भन्दा त्यहाँ उपस्थित सदस्यहरु अन्दाजी ६० बर्ष भन्दा कमको मेरी छोरी भावना काफ्ले मात्रै थिईन् । अरु सबै ६०–८० बर्ष सम्मका हुनुहुन्थ्यो । मेरो अगाडि सेतै केश फुलेकी महिला बस्नु भएको थियो । उहाँ फोटो खिच्न जुरुक्क उठेर गैहाल्नु हुन्थ्यो । मैले उहाँलाई त्यसरी हेरेको देखेर एनले भनिन् उहाँ ८० बर्षकी हुनुभयो । म झन् अचम्म परें त्यो उमेरमा पनि सामाजिक सेवा गर्न कति उत्साहित उनी । पाका उमेरका तर जोस र जाँगर कति कति !
कार्यक्रमको बिचमा एकपल्ट चियर्स पनि भयो । त्यो चियर्स सबैजना एकआपसमा घुलमिल हुन र वातावरण सहज बनाउन थियो शायद । केही बेर पछि डिनर सुरु भयो त्यसपछि पद हस्तान्तरण कार्यक्रम । गवर्नर डेभले पद हस्तान्तरण गराई नयाँ समितिको नाम पनि घोषणा गरे । पास्ट प्रेसिडेन्ट द्यभततथ ले द्यबचदबचब ःबअपभलशष्भलाई प्रेसिडेन्टको पद हस्तान्तरण गरिन् । अन्य सदस्यहरुको नाम पनि घोषणा भयो ।
त्यसै बिचमा कार्यक्रम प्रतोता पास्ट प्रेसिडेन्ट द्यभततथ न्भयचनभले मेरो नाम डेभि फ्रम नेफोल भनिदिइन् र अगाडि मायाँको चिनो लिनको लागि निमन्त्रणा गरिन् । एन र भावनाले खुशी हुँदै ताली मारेर मलाई अगाडि जान प्रेरित गरे । जब म मञ्चतिर जाँदै थिएं तब तालीले हल गुन्जायमान थियो । नेफोली पाहुनाका लागि भनेर । शायद त्यो क्षण सबैभन्दा गर्व गर्न लायक थियो र हर्ष र खुशीले उन्मादले मेरा आँखा चम्किला भएछन् क्यारे । जीवनको सबैभन्दा खुशीको क्षण थियो । नेपाली भएकोमा गर्व लाग्यो ।
खुशी अनि उत्साहित थिएँ म । मलाई कति बोल्नु थियो तर मेरो भाषाको कारण बोल्न खासै सकिन । अंग्रेजी फररर बोल्न नसक्नुको कारण म आफैमा अलिक हतोत्साही थिएँ । तर उनीहरुले अंग्रज िनबोलेकोमा नजाती मानेनन् । नबुझे पनि मेरो हावभाउ, मेरै भाषा सुनिराखे ।
नेपाली बोलेकोमा मलाई खुब मज्जा लाग्यो । त्यहाँ उपस्थित महिलाहरुको आँखामा म थिएं किनकि म नेपाली पहिरनमा थिएँ । एनले पहिले नै बताईदिएकी थिईन् कि उसले लगाएको ड्रेस नेपाली कल्चरल ड्रेस हो भनेर ।
कार्यक्रम सकियो ठिक तीन घन्टामा अर्थात् तोकिएकै समयमा । सबैजनाले नाइस टु मिट यु नेफोल म्याम भन्दै हात मिलाउने अँगालो मार्ने गरे । फेरि पनि आउनु भन्ने निमन्त्रणा पाएँ सबैबाट । डेभ र एनले मलाई घरसम्म पु¥याईदिए । सन २०२० को जुलाई ८ तारिक मेरो लागि अविष्मरणिय रह्यो ।
हामी गफ गर्छौं बढी तर काम कम गर्छौं । यहाँ त्यस्तो रैनछ । यहाँ त जतिसुकै सानो काम भए पनि राम्रो मानिदो रहेछ । मलाई सोधेकी थिईन् एनले कि तिमीले नेपालमा त्यस्तो सामाजिक काम के गरेकी छौ ?
मैले खासै धेरै सामाजिक काम गरेको छैन तर कलमको सहायताले अन्यायको बिरुद्ध लडेको छु । अनि छोरी पढाउनुपर्छ भनेर सकेको अभावमा भएका नानीलाई सहयोग गरेको छु भने उनीहरु खुशीले गद्गद भए । अर्को यहाँको सकारात्मक बिषष थियो बृद्धाहरु उमेरले बृद्ध भय पनि बिचारले १६ बर्षे थिए । अब एनले मलाई न्युजिल्यान्डमा उनको क्लवले गरेको प्रोजेक्ट भिजिट गराउने छु भन्दै हामी छुट्टियौं । मेरी छोरी अनि ज्वाईंलाई आफ्नै ठान्ने एनप्रति हार्दिक नमन गर्दै पछिल्लो भेटका लागि समय तोकेर बिदा भईन् । हार्दिक धन्यवाद एन् जसले मलाई मेरो देशको नाम सामाजिक अभियन्ताको बिचमा गर्व साथ लिने मौका प्रदान गरिन् ।
हार्दिक आभार अपर क्लुथा लायन्स क्लब अफ न्युजिल्यान्ड ।